प्रा.डा.मोहनराज शर्माको अध्यक्षतामा नेसोनको नयाँ कार्यसमिति « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
प्रा.डा.मोहनराज शर्माको अध्यक्षतामा नेसोनको नयाँ कार्यसमिति
२०७४, ७ आश्विन शनिबार ०९:१६ मा प्रकाशित
न्युरो सर्जनहरुको छाता संगठन नेप्लिज सोसाइटी अफ न्युरो सर्जन’ (नेसोन) मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वरिष्ठ न्यूरो सर्जन प्राध्यापक डाक्टर मोहनराज शर्माको अध्यक्षतामा ११ जनाको नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको छ । नेसोनको उपाध्यक्षमा डा. कृष्ण शर्मा, महासचिवमा डा. प्रबिण श्रेष्ठ र कोषाध्यक्षमा डाक्टर समिर आचार्य निर्वाचित हुनुभएको छ । यसैगरी सहसचिवमा डा. अमित थापा र सदस्यहरुमा डाक्टर बालगोपाल कर्माचार्य, डाक्टर सुमित जोशी, डाक्टर प्रवेशराज भण्डारी, डाक्टर रेशा श्रेष्ठ, डाक्टर राजकुमार केसी र डाक्टर सुरज थुलुङ्ग निर्वाचित हुनुभएको छ ।
नेसोनद्धारा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रबीच पूर्व अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर गोपाल रमण शर्माले नयाँ कार्यसमितिलाई नेसोनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिनुभएको छ ।
ब्रेन र स्पाइनल कर्डको शल्यक्रिया न्यूरो सर्जरीअन्तर्गत पर्ने भएकाले मुलुकमा रहेका करिब ४० जना न्यूरो सर्जनलाई कामको चाप छ । तर नेपालमा ब्रेन र स्पाइनल कर्डका कति बिरामी छन् ? भन्ने सन्दर्भमा कूल आँकडा छैन ।
पछिल्लो समय रोग पहिचानसँगै सेवा लिन आउने न्यूरो समस्या भएका बिरामीहरुको संख्यामा पनि बृद्धि भएको छ । विगतमा डायग्नोसिस नभईकन धेरेको मृत्यू हुने गर्दथ्यो । दुई दशक अघिसम्म ५० प्रतिशत न्युरो शल्यक्रियाका लागि विदेश जाने गर्दथे । तर अहिले यो घटेर ५ प्रतिशतमा झरेको सम्बन्धित न्यूरो सर्जनहरु बताउँछन् । ‘मुलुकमा न्यूरो सर्जरीका लागि आवश्यक पर्ने धेरै टेक्नोलोजी भित्रिसकेकाले धेरै बिरामीले विदेश जान पर्दैन—वरिष्ठ न्यूरो सर्जन प्रा.डा. गोपाल रमण शर्मा बताउनुहुन्छ ।’ विदेशको सरह मुलुकमा अत्याधुनिक प्रविधि र क्षमतावान जनशक्तिका कारण विदेशको तुलनामा स्वदेशमा ५ गुणा कम मूल्यमा शल्यक्रिया सेवा उपलब्ध हुने प्रा.डा शर्माको दावी छ ।
न्यूरो शल्यचिकित्सा मेडिटेसन हो । यसमा धैर्यता, क्षमता र ज्ञानको निकै जरुरत पर्छ । त्यसैगरी न्यूरो सर्जरी नयाँ टेक्स बुक पनि हो । यसमा प्रत्येक पटकको शल्यक्रियामा नयाँ कुरा भेटिरहेको हुन्छ । वरिष्ठ न्यूरो शल्यचिकित्सक प्रा.डा. मोहनराज शर्मा भन्नुहुन्छ—‘प्रत्येक बिरामी र प्रत्येक शल्यक्रिया हाम्रा लागि नयाँ पाठ हुन्छ । ’
न्यूरो सर्जरी विश्वमै सर्जरीमध्येको कठिन विधा हो । त्यसैले धेरै चिकित्सकहरु यो विधातिर जान रुचाउँदैनन् । यो शल्यचिकित्सामा आँट र धैर्यता चाहिन्छ । न्यूरो शल्यचिकित्सा विधामा न्यूरो सर्जन फिल्मको सुपरम्यान हो । उनीहरु जहाँ पनि जतिखेर पनि तयार हुनुपर्छ र असाध्यै परिश्रम गर्नुपर्छ । वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डाक्टर वसन्त पन्त भन्नुहुन्छ—‘एक मिनेटको तलमाथिले बिरामीको ज्यान जानसक्छ ।’
मस्तिष्क शरीरको महत्वपूर्ण अंग हो । यसको तौल करिब १.५ के.जी.को हुन्छ । एउटा हातखुट्टा नभएपनि मान्छे बाँच्न सक्छ । तर ब्रेन बिना कोही पनि बाँच्न सक्दैन । यति धेरै महत्वपूर्ण विधा भएर पनि न्यूरो समस्यालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छैन । न्यूरो सर्जरीमा कुनै पनि बजेट छुट्याइएको पनि छैन ।